Oromiyaan ( Afaan Ingiliish: Oromia) kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay'ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Isheenis kan ofii keessa qabduu: kutaa Arsii, Baalee, Harargee, Iluu Abbaa Booraa, Kafaa, Shawaa, Sidaamoo fi Wallagga of keessaa qabdi, Booranaa fi Gujiin Sidaamoo jalatti walitti qabama turan. Magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinnee dha. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha.
Oromiyaan naannoo Tigraay irraa kan hafe naannoolee hundaan wal daangessiti. Kun immoo yeroo tokko tokko walitti bu'insa uuma. Fakkkeenyaaf naannoo Sumaalee keessatti. Godinaaleen Oromiyaa keessatti argaman Arsii, Baalee, Boorana, Harargee Bahaa, Harargee Dhihaa, Iluu Abbaa Booraa, Jimma, Shawaa Bahaa, Shawaa Dhihaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaa, fi Wallagga Dhihaa ti.
Jaarraa digdamii tokkoffaan duraatti, magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee turte, kunis maqaa biraa Addis Ababaa jedhamunis beekamti (maqaan kun Afaan Oromoo miti). Magaalaan guddittii Oromiyaa gara Adaamaatti jijjiiramuun ishee mormii hedduu fideen ture. Morkitoonni akka jedhanitti bulchaan Itoophiyaa Finfinneen Oromiyaa keessatti argamuu ishee hin barbaadne jedhaniiru. Karaa biraammoo, Finfinneen afaan, aadaa fi seenaa Oromoo guddisudhaaf mijaata miti jechudhaan mootumman ni dubbata. Waxabajjii 10, 2005 keessatti Dhaabbata Dimookraatawaa Ummata Oromoo(DhDUO) kan kutaa bulchaa Adda Demookraatwaa Warraaqsa Ummatoota Itoophiyaa (ADWUI) ta'ee, magaalaa guddoo Oromiyaa akka Finfinneetti deebisu ifa godhee.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Oromiyaa&oldid=36744" irraa kan fudhatame
Last edited on 27 Bitootessa 2021, at 10:17
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 27 Bitootessa 2021, sa'aa 10:17 irratti.